Otu esi etinye & Jiri PHP Composer na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
Tinye PHP Composer
Otu esi arụ ọrụ na PHP Composer
Otu esi kwalite PHP Composer
Onye na-ede ihe bụ onye njikwa ngwugwu ngwa-ọkwa maka asụsụ mmemme PHP yiri NPM maka Node.Js ma ọ bụ PIP maka Python. Onye na-ede egwú na-enye usoro ọkọlọtọ maka ijikwa ndabere niile nke ngwanrọ PHP na ụlọ akwụkwọ ndị achọrọ site na nbudata ngwugwu PHP niile nke ọrụ gị yana ijikwa ha maka gị. Ọtụtụ usoro PHP ọgbara ọhụrụ na-eji ya dị ka Laravel, Drupal, Magento na Symfony.
N'ime nkuzi na-esonụ, ị ga-amụta otu esi ebudata na wụnye onye na-ede egwú, yana ụfọdụ dị mkpa ka esi arụ ọrụ na onye na-ede egwú na Debian 11 Bullseye.
Ngwungwu achọrọ: wget, PHP 5.3 ma ọ bụ karịa
Achọrọ ngwugwu ndị a iji budata onye na-ede egwú na maka ojiji n'ọdịnihu. Rịba ama, ọ bụrụ na ị na-eji ụdị PHP a kapịrị ọnụ, ị ga-achọ ịhazigharị ngwugwu PHP dị n'okpuru ka ọ dabara na ụdị ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ịwụnye PHP 8.0 ga-abụ php8.0-mbstring.
Ndị otu na-ede egwú emela akwụkwọ edemede PHP gọọmentị iji wụnye na hazie PHP Composer na sistemụ gị. Ị nwere ike ibudata nke a site na ịga na download page ma ọ bụ imepe ọdụ Debian gị wee mee ihe ndị a.
Ugbu a na setup.php ebudatara, ọ bụ oge ịwụnye onye na-ede egwú. Nke a nwere ike ịbụ n'ụzọ abụọ dị iche iche, otu nke ị nwere ike iwunye onye na-ede egwú n'ụwa nile, ma ọ bụ nke abụọ ọzọ nke bụ ịwụnye kwa ndabere ngwa PHP.
Iji wụnye zuru ụwa ọnụ:
Iji wụnye kwa ngwa:
Dị ka ọ dị n'elu, ị ga-achọ ịnyagharịa na ndekọ ọrụ PHP wee mepụta ndekọ ndekọ maka onye na-ede PHP ka arụnyere.
Ozugbo emechara, gosi na etinyere onye na-ede ihe na nke wuru na ụdị ọ bụ.
Ugbu a nwalee nwụnye onye dere gị site na iji iwu a:
Nkuzi a ga-egosi gị ụfọdụ ọrụ dị mkpa mgbe etinyere onye na-ede PHP iji nwalee ọrụ ya.
Mbụ, mepụta ndekọ ọrụ gị:
Na-esote, chọta ngwugwu si Onye ngwugwu, ma ọ bụ ọzọ jiri ihe atụ nkuzi wee mee iwu a ka ịmalite faịlụ composer.json ọhụrụ wee wụnye ngwugwu carbon:
Dị ka n'elu, onye na-ede egwú ga-emepụta na-akpaghị aka ma melite faịlụ composer.json yana ndabere achọrọ. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye ma ọ bụ wetuo ngwugwu dị na nọmba ụdịdị.
N'ime akwụkwọ ndekọ aha, ị nwere ike depụta faịlụ na akwụkwọ ndekọ aha dị n'ime ya site na iji ls iwu:
Nhazi nke usoro na faịlụ ndị edepụtara.
onye dere.json - Faịlụ emepụtara maka ọrụ yana ndabere PHP niile.
dere - Faịlụ nwere ndepụta ngwugwu na ụdị niile.
ere - Akwụkwọ ndekọ ebe ebudatara ma tinye ihe ndabere.
Site na oru ngo gị, ị nwere ike ịchọrọ ma ọ bụ chọọ imelite ihe ndabere, ma enwere ike ime nke a na-agba ọsọ na-esonụ:
Dịka ị na-ahụ n'elu, ọ nweghị ihe ndabere chọrọ imelite. Ọ bụrụ na enwere, usoro a ga-amalite.
Ọ bụrụ na ịchọghị modul ahụ, ị ​​nwere ike wepu ya na iwu wepụ iwu nke onye dere ya:
Mgbe ị na-ewepụ ngwugwu, dị ka ọ dị na ịwụnye, iwepụ ga-emelite faịlụ composer.json ozugbo. Ị nwere ike nyochaa nke a site na iji iwu cat.
Ọmụmaatụ tupu iwepụ ngwugwu psr/log:
Ọmụmaatụ mgbe e wepụrụ ngwugwu psr/log:
Akụkụ dị mma nke onye na-ede PHP bụ na ọ nwere ike ịkwalite onwe ya gaa na ụdị kwụsiri ike kachasị ọhụrụ dị. Gbaa iwu a ka ịkwalite.
Dị ka ekwuru n'elu, onye na-ede akwụkwọ PHP adịlarị na ụdị kachasị ọhụrụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ nkwalite dị, a ga-akpali gị ịkwalite.
Ị mụtala otu esi etinye onye na-ede PHP na usoro Debian 11 Bullseye gị yana ụfọdụ ọrụ na nkuzi. N'ozuzu, onye na-ede egwú bụ ngwá ọrụ mara mma na-ewu ewu, na obi abụọ adịghị ya na ị ga-ezute nke a dị ka onye mmepụta. Otu n'ime uru kachasị mma nke inwe onye na-ede egwú bụ na ọ na-emekọ ihe ndabere PHP na ntọala ọ bụla. Ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ọrụ n'otu igwe nke dabere na ịwụnye ụdị PHP dị iche iche.